I-Centric, i-Studio yabucala kunye neyimfuneko
Isitudiyo esincinci kunye nesithokomeleyo kwindlu ezolileyo kwizakhiwo ezimhlophe zaseSucre ezimhlophe. Iimitha ezingama-200 ezikujikelezileyo uya kufumana isikwere esiphambili, imarike esembindini, iimyuziyam, ii-pubs kunye neendawo zokutyela. Ixhotyiswe ngezinto ezibalulekileyo zokuhlala kwesi sixeko sihle. Ine-WiFi, ibhedi ephindwe kabini, itafile encinci, ifriji encinci, ikhitshi (ene-oveni) kunye negumbi lokuhlambela labucala. Inefestile encinci yokungenisa umoya phezu kwekhitshi.
Esi situdiyo sipholileyo sikwindlu yobukoloniyali eSucre kwaye iqulethe yonke into oyifunayo ukuze uhlale kwesi sixeko sihle. Ibekwe kwindawo esembindini, iimitha nje ezingama-200 ukusuka kwisikwere esikhulu esinee-pubs, iindawo zokutyela, iimyuziyam, iimarike nokunye.
Isitudiyo sabucala sinomgangatho weplanga we-rustic kunye nebhedi ekhululekileyo ephindwe kabini kunye ne-nightstand kunye nokukhanya kokufunda. Inetafile enezitulo ezibini. Kukho uxhumano lwe-WiFi olulungileyo.
Indawo yekhitshi edibeneyo ixhotyiswe ngezinto ezisisiseko, kubandakanywa ifriji encinci, isitovu se-4 esine-oveni, iketile, i-cutlery, izitya, ipani kunye nebhodi yokusika.
Indlu yangasese yangasese ineshawa kunye namanzi ashushu akhoyo. Iitawuli kunye neshampu zinikezelwe.
Indlu inendawo ezolileyo kunye nekhululekileyo kunye nesango lokungena elikhuselekileyo. Amaqela awavumelekanga. Inkonzo yokuhlamba impahla yangaphakathi iyafumaneka ngentlawulo.
Kuya kufuneka wazi ukuba kukho ifestile encinci yokungenisa umoya ngaphezulu kwekhitshi. Uninzi lwezibane zokwenziwa.
4.51 · Izimvo eziyi-137
I enjoy painting and traveling around the world, I'm host since 2018, and I love it.